Istaraatijiyad Rainbow: ganacsi dareen leh ikhtiyaariyada ikhtiyaariga ah | vfxAlert official blog
Istaraatiijiyad «Qaanso-roobaad»: ganacsi dareen leh ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ah
Markaad ka fekereyso sida lacag looga sameeyo ikhtiyaaraadka ikhtiyaariga ah , kuwa bilowga ah waxay ugu horreyn daraasad ku sameeyaan xeelado, falanqeyn farsamo iyo aasaasi ah. Waxay iloobaan inay jirto arrin kale oo guusha ah, oo ay bixiso dabeecadda - dareenku. Haddii aad saaxiib ka dhigatid, waxaad had iyo jeer ka noqon kartaa hal tallaabo inta kale. Isku day inaad u adeegsato iyo aqoontaada istiraatiijiyadda « Rainbow ».
Istaraatiijiyaddu waxay isticmaashaa hal tilmaame:
Celceliska Dhaqdhaqaaqa Qaanso-roobeed . Tilmaamaha isbeddelku waa celcelis yar oo Dhaqdhaqaaq Dhaqdhaqaaq leh isla muddadaas iyo isweydaarsi ka duwan qiimaha hadda jira. Fikradda tilmaamuhu waa in jaangooyooyin kaladuwan ay muujinayaan isbeddelka waqtiyada ka sarreeya iyo kuwa hoose ee la xiriira midka hadda jira isla markaana ay suurtagal ka dhigeyso in si sax ah loo furo ikhtiyaarka ikhtiyaariga ah. Farsamo la mid ah ayaa loo adeegsadaa Ichimoku Kinko Hyo istiraatiijiyadeed oo aad sidoo kale ku tijaabin karto dareenkaaga ganacsadaha iyada oo aan la'aanteedna aadan ku guuleysan karin guul dhab ah.
Tilmaamuhu lama heli karo dhammaan goobaha ikhtiyaariyada ikhtiyaariga ah . Xaaladeena? barmaamijka ganacsiga ee Deriv ee ganacsiga ayaa loo isticmaalay Binary.com. Haddii dillaalkaagu uusan lahayn tilmaamahan, waxaad ku soo dejisan kartaa bilaash internetka oo waxaad u isticmaali kartaa meel kasta oo ganacsi oo kale (sida MetaTrader) oo ah calaamado lagu furayo ikhtiyaarka koontadaada.
Kadib rakibida celceliska dhaqaajinta, shaashadda shaqada terminalku waxay qaadataa foomka soo socda (midabka midabka waa la beddeli karaa):
Ikhtiyaar wac (kac). Qiimaha ayaa laga soo bilaabayaa sagxadda kor oo dhan Celceliska Dhaqdhaqaaqa ama wuxuu galayaa "daruurta" tilmaame. Xulashada labaad ayaa kaliya loogu talagalay ganacsatada xirfadleyda ah!
GAL (FALL) xulasho. Xaaladaha iska soo horjeedda - qiimaha ka hooseeya Dhammaan Celceliska Dhaqdhaqaaqa ama kor ilaa hoos wuxuu galayaa "daruurta".
Qalabyada isla kooxda, kiiskeenna, aaladaha isbeddellada, xitaa iyagoo leh xaddidaadyo kala duwan, ma noqon karaan qodob go'aaminaya furitaanka boos cusub. Waxaa lagugula talinayaa inaad ka hesho xaqiijin dheeri ah oscillators, tusaale ahaan, RSI, CCI, Stochastic, ama vfxAlert software calaamadeynta binary , taas oo si sax ah u tixgelineysa muuqaalka xaaladaha xad dhaafka / xaddiga xad dhaafka ah iyo dhaqdhaqaaqa isbeddellada.
Markaad ka ganacsanayso maalinta gudaheeda, waxaan kugula talineynaa inaad sameyso falanqeyn ballaaran oo suuqa ah - sida caadiga ah, waxaa jira xaalado badan oo caadi ah oo ku saabsan hantida iyo waqtiyada kala duwan, kuwaas oo celceliska celceliska ay isku mid ka falcelinayaan.
Ganacsi otomaatig ah sida ku xusan istiraatiijiyadda « Rainbow » waa suurtagal: dhowr nooc oo ah ikhtiyaari ikhtiyaari ah waxaa laga heli karaa shabakadda, laakiin, sida nidaam kasta oo wax lagu nadiifiyo, way ka wanaagsan tahay in gacan looga ganacsado iyadoo la adeegsanayo qorshahan. Tani waxay kuu oggolaaneysaa inaad si wax ku ool ah u hagaajiso nidaamka isbeddelada suuqa, iyo hantida badan ee istiraatiijiyaddu waxay kuu dammaanad qaadaysaa inaad joogto u joogto maalin kasta.